Dowladda Turkiga oo Soomaaliya ku taageertay 356-Milyan oo doolar sanadkii lasoo dhaafay. – Radio Daljir
Dowladda Turkiga oo Soomaaliya ku taageertay 356-Milyan oo doolar sanadkii lasoo dhaafay.
Istambul,Feb 23 -Xafiiska iskaashiga diblumaasiyadda ee dowladda Turkiga ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay dowladda Turkiga inay lacag dhan 365-Milyan oo doolarka Mareykanka ah inay kubixisay howlaha gargaar ee sanadkii lasoo dhaafay ay ka fulisay wadanka Soomaaliya.
Turkiga ayaa waxaa uu sheegay qarashkaasi inuu isugu jiray lacago cadaan ah iyo gargaarka hay’adaha Turkigu ay gaarsiiyeen dadka abaarta ay saamaysay ee Soomaaliya ku nool.
Abaartii sanadkii lasoo dhaafay soo wajahday Soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay 29-kun oo carruur Soomaaliyeed ah,dowladda Turkiga ayaa xiligaasi qaaday dadaallo loogu gurmanayo dadka ay macluushu soo wajahday.
Raysal Wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan iyo xubno wasiiro ah oo kasocda dowladda Turkiga ayaa booqday Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay,si’ay caalamka ugu muujiyaan in la xaliyo colaadda iyo macluusha ba’an ee dalka soo wajahaday.
Gargaarka ay dowladda Turkiga u fidisay Soomaaliya ayaa ka koobnaa fursado waxbarsho oo la siiyay arday Soomaaliyeed,gargaar caafimaad iyo samata bixinta dadkii ay abaarta soo wajahday.